Sandals na Resorts Resorts na-ebuli elu itinye aka na ntinye
Home » Akụkọ Caribbean » Sandals na Resorts Resorts na-ebuli elu itinye aka na ntinye
Onye na-eme ihe nkiri na onye na-eme ihe nkiri Autism Holly Robinson Peete na-anọ na Sandals na Beads Resorts n'akụkụ Julia, Muppet na Autism nke na-enye ndị na-arịa ọrịa sensory ọrụ.
N’ememe nke ọnwa nnabata Autism, Sandals na Beads Resorts na-agbasawanye onyinye na ụlọ obibi okomoko ya gụnyere na Jamaica na ndị Turks na Caicos ebe a ga-enwetakwa ebe ntụrụndụ dị ka Advanced Certified Autism Centers (ACAC).
Otu n'ime ụmụaka 54 na-arịa ọrịa autism na United States.
Sandals and Resorts Resorts na-etinye aka na ezinụlọ nwere ụmụaka na ụdịdị autism, na-eme ka ahụmịhe ezumike, ọchị, na nke dị jụụ dabara na mkpa ha.
Ndị otu egwuregwu egwuregwu osimiri na Jamaica na ndị Turks & Caicos ga-esonye na ọzụzụ ọzụzụ autism dị elu ebe a na-emegharị ebe ndị a.
Akpụkpọ ụkwụ Sandals na Beaches bụ akụkụ nke Sandals Resorts International nke bụ ụlọ ọrụ nne na nna gaa ụdị azụmahịa 5 gafee mba asaa. Resorts Resorts bụ onye na-arụ ọrụ nke ebe ntụrụndụ niile maka ndị di na nwunye na ezinụlọ dị na Caribbean, hibere na 1997.
N'ịsọpụrụ ọnwa nnabata nke Autism, Resorts Be Resorts ekwuputala nkwado ọ gbasaa nye ezinụlọ nwere ụmụaka na ụdịdị autism ahụ, na-eme ka ahụmịhe ezumike, nke ezumike na nke ezumike dị mma maka mkpa ha.
Site na otu n'ime ụmụaka 54 chọpụtara na autism na United States, mkpa njem pụrụ iche na-aga n'ihu ịbụ otu n'ime ngalaba njem ezinụlọ na-eto ngwa ngwa na otu nke enweghị oke nchekwa. Iwulite na mmekorita nke ya na International Board of Credential and Continuing Education Standards (IBCCES) - onye ndu ụwa zuru oke na ọzụzụ na asambodo na -emepụta ihe - Ebe a na-enweta osimiri agbatịkwuola nzere nzere Advanced Certified Autism Center (ACAC) site na 2023 ma na-aga n'ihu ịbụ ụwa mbụ na ụlọ ọrụ ACAC na-eme njem na-ekwusi ike nraranye ya iji hụ na ezinụlọ ọ bụla nwere ike ịnụ ụtọ ahụmịhe bara ọgaranya gụnyere ®lọ Ọrụ Gụnyere.